Ganitong - 他加禄语 - 科萨语 翻译和实例
您搜索了: ganitong (他加禄语 - 科萨语)
Ke kaloku uDavide wasenza esi simbonono ngoSawule nangoYonatan unyana wakhe,
Abakhonzi bakaSawule bamxelela, besithi, UDavide uthethe wenjenje.
Nale nto ndiyibone ibubulumko phantsi kwelanga, babukhulu kum:
Kwakunje ukwenziwa kwenqwelwana: zazineepanele phakathi kwemiqhele;
Ngoku ke niqhayisa ngokuqhankqalaza kwenu; konke ukuqhayisa okunjalo akundawo.
Ke ethe wazala unyana osisigwinta, ophalaza igazi, owenza nokuba inye kwezo zinto,
OoRehum umkhumbuzi wezinto zakomkhulu, noShimshayi umbhali, babhala incwadi ngeYerusalem kuArtashashta ukumkani, ngolu hlobo.
Bathetha abantu kuye ngokwelaa lizwi, bathi, Uya kwenjiwa nje umntu ombuleleyo.
Ke kaloku, zakubon ukuba zenziwe ngokunjalo ezo zinto, ababingeleli bangena okunene amaxa onke kowokuqala umnquba, beyifeza imibuso kaThixo.
Nisenjenjalonje ke ukona kubo abazalwana, nisidubule nje isazela sabo esiswele amandla, nona kuKristu.
uye kukumkani, uthethe kuye wenjenje. UYowabhi wafaka amazwi emlonyeni wayo.
Noodade bakhe abakuthi apha bonke na? Uzizuze phi na phofu lo zonke ezi zinto?
Sovumelana nani ngale ndawo yodwa, ukuba nithe naba njengathi, ngokuthi yaluke kuni yonke into eyindoda.
Wenza ke uAbhisalom ngendawo enjalo kumaSirayeli onke, abesiza kukumkani ekugwebeni. Waziba uAbhisalom iintliziyo zamadoda akwaSirayeli.
826 (意大利语>德语)nspectie leefomgeving en transport (荷兰语>英语)essay about mero desh mero gaurav (英语>尼泊尔语)indefinite leave (英语>他加禄语)国産小麦を使用 (日语>意大利语)is service personne (英语>印地语)resorts (英语>简体中文)kai paki (毛利语>英语)palagi nalang akong mali sayo (他加禄语>英语)¿fuiste al cine ayer (西班牙语>英语)influence (英语>阿尔巴尼亚语)da iawn, ferch (威尔士语>英语)mere liye fakhar ki baat hai (印地语>英语)aam todna (印地语>英语)guten morgen mein sonnenschein (德语>阿拉伯语)georg stingl (德语>英语)관료에게 (韩语>意大利语)那有可能发生 (简体中文>意大利语)mujhe nahi aati hai (印地语>英语)ngu rốt (越南语>英语)verhalende opstel oor lag is die beste medisyne (英语>南非荷兰语)kal hi tujhe yaad kiya (印地语>英语)over (英语>南非荷兰语)mai soti hu aab (印地语>英语)meaning ng pangaea (他加禄语>英语)